စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, June 20, 2014 Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ကျမစာတမ်းတင်တုန်းကလည်းအဲလိုဘဲ။ အုိုးထဲတွေ့ တာအကုန်ပစ်ထဲ့ချက်စားတာဘာမှန်းတောင်အမည်မဖေါ်နုိုင်အောင်ဘဲ။
ဖိစီးမှုတွေများပေမဲ့စာတမ်းအဆုံးသတ်ပြီးစာအုပ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့တော်တော်လေးကျေနပ်ပီတိဖြစ်ရမှာပါ။ Hang in there. :)
ထူးထူးချွန်ချွန် အောင်မြင်ပါစေဗျာ။ ပညာတွေ ဆက်သင်ခွင့်ရတာ ကံကောင်းပါတယ်။ အခက်အခဲတွေ အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ပါစေ
ကျွန်တော်လဲ မာစတာ ဆက်တက်ချင်တာဗျာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ငွေရေးကြေးရေးကြောင့် ပညာရေးကို ရပ်ထားရတာ ကြာတော့ အခု ပြန်စဖို့ motivation သိပ်အားမကောင်းဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အချိန်ရတဲု့ခါ နောက်လူတွေအတွက် အားပေးပို့စ်လေး တစ်စောင်လောက် ရေးပေးပါလား
shwenyar tharlay said...
ဟုတ်ကဲ့...နာမည်လည်းမပေါ်တော့..ကို Anonymous လို့ပဲခေါ်မယ်ဗျာ...
ရေးပေးပါမယ်...အခုတော့Adviser သုံးယောက်ကြားမှာ ဘယ်လိုမှမအားလပ်နိုင်သေးလို့ပါ...